Global Voices teny Malagasy » Afgàna Mpatory An-dàlana i Asharaf Barati, Talohan’ny Nahalasa Azy Ho Mpandraharaha Mahomby, Manonofy Ny Hanarina Ny Fireneny · Global Voices teny Malagasy » Print
Afgàna Mpatory An-dàlana i Asharaf Barati, Talohan'ny Nahalasa Azy Ho Mpandraharaha Mahomby, Manonofy Ny Hanarina Ny Fireneny
Voadika ny 14 Novambra 2017 3:52 GMT 1	 · Mpanoratra Nicole Valentini Nandika (fr) i Abdoulaye Bah, miora
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Afganistana, Ady & Fifandirana, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, Ny Tetezana - The Bridge
Asharaf Barati ao Venizy miaraka amin'i Yasin Tanin, namany no sady mpiaramiasa aminy. Sary an'i Basir Ahang, fampiasàna nahazoana alàlana.
Raha tsy misy filazàna mifanohitra, mitondra mankaminà pejy amin'ny teny anglisy daholo ny rohy ato anatin'ity lahatsoratra ity.
Nandritra ny alim-pararano iray tamin'ny 1994, niomana ny haka an'i Afghanistàna ry zareo Talibàna. Roa taona monja talohan'io, nisy ady an-trano nahatsiravina nifanaovan'ireo ankolafy “modzahidina” samihafa izay nandavo ilay governemanta mpiandany tamin'ny sovietika tsy naharitra ela tamin'ny fitondràna, namadika ny firenena ho tany ngazana ifanjevoan'ny hadisoam-panantenana sy ny horohoro.
Tamin'io fotoana io, tany amin'ny vohitra kely iray ao amin'ny faritany afovoany atsinanan'i Afghanistàna, teo ampihinanana ny sakafo harivany niaraka tamin'ny fianakaviany i Asharaf Barati, zazalahy 13 taona, avy amin'ny foko ‘hazara’. Na tsy nasehon'ny reniny aza, fantany fa mandritra ny fotoana elabe no tsy hahitany intsony ny zanany lahy, ary angamba ho mandrakizay. Voaomana ho ny ampitso vao mangiran-dratsy ny fiaingàn-drazazalahy. Ny dadatoany no tokony handalo haka azy sy hanolotra azy an'ireo mpampita an-tsokosoko.
Ghazni, Afghanistàna. Sary nalain'ny Biraon'ny raharaham-bahoaka ao amin'ny foiben'ny ISAF. Ny 18 Aprily 2010, nitsidika ilay tanàna tranainy tao Ghazni, ao amin'ny faritanin'i Ghazni, Afghanistàna ny tarik'ireo mpanarina avy amin'ny faritany. (Fakantsary fitondra miady iraisan-tafika tao Afghanistàna, sary nopihan'ny serzà teknisiana James May). CC-2.0
Vao avy maty novonoin'ireo talibàna indrindra i Abdul Ali Mazari, filohan'ny rantsana politika ao amin'ny Hezb-e-Wahdat, izay ny Hazara no be indrindra ao aminy, ary marobe ireo Hazara no nahatsiaro tampoka ho marefo. Niha-nanakaiky ry zareo talibàna, malaza amin'ny fankahalàny Hazaras. Nandao ny firenena ireto farany, ny sasany ho any Pakistàna, ny hafa ho any Iràna.
Andro vitsy taorian'ny nandosirany dia tonga tao Pakistàna i Asharaf. Nandritra ny taona vitsivitsy, niasa tao aminà toerana iray fitrandrahana arintany izy, asa izay nandreraka sy nitondra aretina ho azy. Taorian'izay, nentiny ireo vola kely azony ary nankany Iràna izy, toerana vaovao indray naha-vahiny azy tao anatin'ireo mpitsoa-ponenana marobe, nibaby kitapo feno simenitra mavesatra noho ny vatany mba hahazo vola hivelomana. Toy ny amin'izao fotoana izao, iray amin'ireo toedraharaha fanararaotana tena sarotra  no niainan'ireo Afgàna mpitsoaponenana tonga tany Iràna
“Toedraharaha sarotra tamin'izany”, hoy i Asharaf mahatsiahy ao anaty antsafa iray nataony ho an'ny Global Voices. “Izahay, afgàna mpitsoaponenana, dia niaina tanaty toeram-pitrandrahana poakaty izay sady toeram-piasànay ihany, tsy nisy tolotra, tsy nisy fitaovana manome hafanàna, lamba ‘nylon’ no napetakay tamin'ny varavarankely mba hiarovana tsy ho fatin'ny hatsiaka amin'ny alina”.
Efatra taona taorian'izay, nilaozan'i Asharaf ny fiainana naha-olona tsy nanana taratasy ara-dalàna azy tao Iràna ary nanomana ny diany ho any Eoropa izy. Taorian'ny fitetezana ranomasina nampahatahotra, natsipin'ny onja teny amin'ny nosy kely grika iray tsy misy mponina izy. Tamin'ny 2002, taorian'ny nandavan'ireo manampahefana grika ny fangatahany fialokalofana, tonga tany Italia i Asharaf nony farany.
Nandritry ny fotoana maromaro dia nivenjivenjy teny an'araben'i Roma i Asharaf, tsy nanana hialofana, natory teny an-kianja ary tany aminà fiangonana iray mizara sakafo in-droa isanandro ho an'ireo tsy manan-koraisina no naka sakafo. Raha marina fa lasa toerana iray hahitàna vintana faharoa ho an'ireo izay nisedra fandàvana tany an-kafa i Italia, amin'ny resaka fialokalofana, raha jerena amin'ireo taham-panekena somary avo ihany, dia marina ihany koa fa tena tsizarizary ny fepetra andraisana ireo mpitady fialokalofana. Araka ny ambaran'ny ONG Civil Liberties Union for Europe , (Sendikà Sivily Ho An'ny Fahalalahana ao Eoropa) “tena tsy misy ny mangarahara ao anatin'ilay rafitra. Maherin'ny 3000 ireo “toby tsy misy toa azy” andraisana sy ametrahana ny ankamaroan'ireo mpitady fialokalofana, toerana izay namboarina maimaika, ary olona tsy manana ny fahaizana manao sy tsy tsara ofana no niandraikitra ny fanorenana”.
Araka ny lalàna italiana , tsy afaka miditra any amin'ireo toerana fialofana ny mpangataka fialokalofana raha tsy efa voasoratra ofisialy, dingana iray mety haharitra am-bolana maro aorian'ny nametrahana ny taratasy fangatahana. Mandritra io fotoana io, amin'ireo olona tsy afaka mamoaka vola mba hahitàna toerana hialofana dia tsy maintsy mitodika amin'ny fitadiavana ny fangorahan'ireo namana na matory eny an-kalamanjàna.
Toy izany no nanjo an'i Asharaf.
Saingy ilay fanahy tsy hay tohaina ao anatiny no nanakana azy tsy hijanona ela loatra eny amin'ny zanatohatra farany ambany indrindra. Taorian'ny niasàny an-taona maro tamin'ireo sehatra maro amin'ny asa fanorenana, nampiasain'i Asharaf ny tahiriny mba hanokafana hotely kely iray tao Venizy. Fahombiazana tokoa no azo taorian'ny fotoana naharitraritra, nanokatra iray faharoa izy, niampy toerana fivarotana sakafo entina fitondra mandeha.
Ankehitriny ny tantaran'i Asharaf Barati dia tanisaina anaty fanadihadiana iray mitondra ny lohateny hoe “Ao ambadik'ireo fiainana lafatra ao Venizy, Hazara iray ao Italia”, notontosain'i Amin Wahidi. Azon'ilay sarimihetsika ny lokan'ny andiany faha-24 tamin'ny Venice City Award taona 2017.
Asharaf Barati manoloana ny “Casa Fiori”, iray amin'ireo hoteliny ao Venizy. Sary an'i Basir Ahang. Fampiasàna nahazoana alàlana.
Ao Italia, miatrika ady sarotra ireo mpandraharaha, indrindra fa ireo izay tsy teratany italiàna. Ny resaka fikarakaràna taratasy amin'ny birao, ny hetra ambony be ary ny fahafahana mahazo findramana vola dia isan'ireo sakana goavana.
Araka ny tombana iray tsy ofisialy , misy eo amin'ny 20.000 eo ireo afgàna ao Italia. Ho an'ny maro amin'ireo mpifindramonina, ho an'ny dian-dry zareo hamonjy fitoviana hafa ao Eoropa  dia toeram-piatoana monja ihany ilay firenena. Saingy tato anatin'ny taona vitsivitsy farany, maromaro ireo orinasa tantaninà Afgàna no tafatsangana, indrindra fa ireo toerana fanenoman-damba, fikarakarana fivahinianana, hoely ary toerana fisakafoanana. Nahazo tsikera miabo avy amin'ireo gazety italiàna ny sasany tamin'ireo toerana fisakafoanana tantaninà noho ny haify lafatra avy any an-dakozian'izy ireny.
Ao Venizy ohatra, ao amin'ny toerana fikasafoanana Orient Experience [it] an'i Hamed Ahmadi, mpitsoa-ponenana avy aminà zom-pirenena samihafa daholo ireo mpandroso sakafo sy mpiasa. Tantarain-dry zareo ao anatin'ny lisitra misy ny sakafo aroson'ilay toerana fisakafoana ny dian-dry zareo mandra-pahatongany tao Italia, namakivaky ireo toerana midadasika Afgàna, Irakiàna, tiorka ary grika. Ali Khan Qalandari, afgàna mpandraharaha, dia nanokatra toerana iray vaovao fisakafoanana ao Padoue, antsoina hoe Peace & Spice [it] , ary dia Afgàna ihany koa no ao ambadik'ilay “pizzeria Kabulogna” ao Bologne sy toerana iray fihinanana sushi [it]  ao Rome.
Saingy mitatra lavitra mihoatra ny tontolon'ny hotely sy ny varotra antsinjarany ao Italia ny fanirian'i Asharaf, mankany amin'ireo tany nilaozany noho ny tsindry fony izy mbola adolantsento.
“Amin'izay toerana mety hisy zava-mitranga no misy ny fanararaotra”, hoy i Asharaf tamim-pitsikiana. ” Te-hampiasa vola any Afganistàna aho, tsy nanadino velively ny fireneko aho ary tsy afaka ny hiaina finaritra raha mahafantatra fa mijaly ny mpiray tanindrazana amiko. Eritreritro ny hanomboka tetikasa iray ho an'ireo mpamboly any amin'ny faritany faran'izay mahantra ao amin'ny firenena, indrindra fa ireo vehivavy. Izy ireo no manome ny antsasaky ny vahoaka ary tsy maintsy omena fahafahana manao zavatra mitovy amin'ny hafa. “
Ao an-tsain'i Asharaf ihany koa ny hanokatra ozinina ao Kaboul ka ao ny olona no hianatra ny teknikan'ny famonosana entana sy ny fitahirizana. “Amin'io fomba io,” hoy izy, “ho afaka mivarotra ny ambin'ny vokatr'izy ireo eny an-tsena ry zareo ary manatsara ny toebolany.”
Ny làlana nodiavin'ilay mpandraharaha mahomby dia manaraka ny tsy fitoniana sy ny fisalasalàna mankany amin'ny fahatoniana sy ny fahombiazana. Satria niainan'izy tenany mihitsy io dia io, tian'i Asharaf ankehitriny ny hanampy an'i Afganistàna hanao toy izany koa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/11/14/109786/
 toedraharaha fanararaotana tena sarotra: http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/apartheid-being-afghan-iran-2007076995
 Civil Liberties Union for Europe: https://www.liberties.eu/en/news/lasciatecientrare-the-business-of-refugees-reception-in-italy/7424
 ny lalàna italiana: http://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/reception-conditions/access-and-forms-reception-conditions/criteria-and
 fanadihadiana iray : https://www.kabulpress.org/article240122.html
 ny tombana iray tsy ofisialy: https://www.afghanistan-analysts.org/afghan-asylum-seekers-in-italy-a-place-of-temporary-respite/
 Orient Experience [it] : http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/09/21/venezia-apre-ristorante-dove-lavorano-migranti-ospiti-del-centro-daccoglienza/2053550/
 Peace & Spice [it]: http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2017/09/13/news/migranti-in-cucina-a-padova-apre-nuovo-ristorante-etnico-1.15847702
 toerana iray fihinanana sushi [it]: https://www.puntarellarossa.it/2017/09/11/pisu-roma-pizza-sushi-il-sogno-dintegrazione-di-cinque-ragazzi-afghani-del-pigneto-diventa-realta/